Karen People » Zwekabin	choose language
Karen Font and Keyboard	Kwekabaw KB (Normal)New
ကွန်ပြူတာ သင်ခန်းစာများ	၀င်းဒိုး XP အခြေခံ
Anit Virus (4)
ဒေါင်းလုတ် မန်နေဂျာ (1)
ပြောခဲ့တာတွေsaw myint on ဆက်သွယ်ပါစောဖိုး on Kwekabaw Keyboard, Zwekabin Font, Unicodeီdecembersaung on သူပုန်လေးတယောက်အကြောင်ုးkayinkyi on ရုပ်ရှင်၊သီချင်းsanyinyihtun on ဆက်သွယ်ပါယခင်ပို့စ်များ	October 2011 (4)
၀င်းဒိုးစ်, Anit Virus, ကွန်ပြူတာ2Comments »
(အခုပြောမှာက ဗိုင်းရပ်စ်က ဖိုင်တွေကို ၀င်းဒိုးစ်စစ်စတမ်ဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်လို့ ဖိုင်တွေ မတွေ့ရတော့တဲ့ အမျိုးအစားအတွက်ပါ။ ဖိုင်တွေက ပျက်သွားတာမဟုတ်ဘဲ ရှိနေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် Hidden file/folder ဖြစ်သွားတာပါ။ Right Click > Properties မှာ Hidden ကို uncheck လုပ်လို့လည်း မရပါ။)
ပထမဆုံး Control Panel > Folder Options ကိုဖွင့်ပြီး View ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့
ပြီးတော့ Ok, Ok တွေ လုပ်လိုက်တယ်။ Continue reading »
written by Kyaw Ehna Oct 14
unicode, ကရင်စာပေ, ကရင့်ရေးရာ4Comments »
Zwekabain font ကိုသုံးပြီး ကရင်စာတွေ ရိုက်ဖို့အတွက် Kwekabaw Keyboard အသစ် ထပ်ရေးလိုက်ပါတယ်။ အခု ကီးဘုတ်အသစ်က စကောကရင်စာအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်တဲ့ အတွက် စကောကရင်စာမှာ အသုံးများတဲ့ KNU လက်ကွက်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ဒေါင်းလုတ်ယူဖို့အတွက် ဘယ်ဘက်ခြမ်းအပေါ်ဒေါင့်နားမှာ ဖောင့်ရော ကီးဘုတ် အသစ်၊ အဟောင်း အားလုံး တင်ထားလိုက်ပါပြီ။ ကီးဘုတ်နဲ့အတူ လက်ကွက်တွေလည်း တခါတည်း ထည့်ထားပေးပါတယ်။ Continue reading »
ကရင့်ရေးရာ, ပေးစာ 13 Comments »
Comment ရှည်ကြီးတခုမို့လို့ အများသူငှာ ဖတ်ရအောင် ပို့စ်အဖြစ် ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ အခုစာထဲကလို အမြင်ကျဉ်းသူလည်း ရှိနိုင်ပေမယ့် အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်မယ်လို့ ကျနော် ကတော့ထင်မိပါတယ်။
သို့ …..ကရင်စကားတတ်ပါတယ် ကရင်ပီသပါပေတယ်ဆိုတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်က ကရင် လူမျိုးအားလုံး… ကျနော်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ကလူတွေ စကားအသုံးအနှုံး တချို့ကိုဝေငှချင်ပါတယ်။ တော်တော်များများ ကရင်ပြည်နယ်က ကရင် အများစုဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကရင်စကားတတ်ပါတယ် ကရင်ပြည်မှာမွေးပါတယ် ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မာနထောင်လွှား စိတ်ကြီးဝင် အထင်ကြီးနေကြလေရဲ့။
နောက်ပီးလဲရှိပါသေးတယ်။ တခြား နယ်၊ တိုင်းတွေမှာရှိကြတဲ့ ကရင်တွေကို ကရင်မစစ်ကြဘူးလို့ အပ်ပေါက်လောက်မကျယ်တဲ့ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းစိတ်နဲ့ မြင်ကြတာကို ကျနော်ကိုယ်တွေ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ခုချိန်ထိလဲ ကြုံတွေ့နေရဆဲပါ။ Continue reading »
written by Kyaw Ehna Oct 13
Icon တွေအားလုံး ပုံစံပြောင်းသွားတယ်
Anit Virus 1 Comment »
မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ စက်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ထိသွားတော့ Program icon တွေအားလုံး icon ပုံစံတခုတည်းဖြစ်သွားပါတယ်။ သူ့စက်က ၀င်းဒိုးစ်ဆဲဗင်းပါ။ ဒက်စတော့နဲ့ Start Menu ထဲရှိတဲ့ Program icon တွေအားလုံး Internet Explorer(IE) ပုံစံ ပြောင်းသွားပါတယ်။ ဘာမှ ဖွင့်မရတော့ပါဘူး။
ဒါနဲ့ Control Panel > Folder Options ကိုဖွင့်ပြီး View ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့
written by Kyaw Ehna Sep 29
ပိတ်ချင်သလား ၀ှက်ချင်သလား ???
ကွန်ပြူတာ2Comments »
အားလုံး စာဖတ် မိတ်တွေများ ၊ လာလည်တဲ့ မိတ်ဆွေများကို ပို့စ်အတင်နည်းသွားတဲ့အတွက် အယင်းဆုံး တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ကဲ .. ဒီနေ့တော့ အသုံးဝင်မေ ထင်တဲ့ နည်းပညာနှစ်ခုကို ကျနော် မျှဝေ လိုက်ပါတယ်။
(ပထမ) ကွန်ပြူတာကို အချိန်နဲ့ပိတ်ခိုင်းခြင်း။
ကျနော်တို့ windows အထဲမှာ အလိုအလျှောက်ပါတဲ့ ကွန်ပျူတာကို ပိတ်စေတဲ့ နည်းလမ်းလေးတခုပါပါတယ်။ အဲဒါလေးကို ကျနော်ပြောပြမယ်ဗျာ။ သိပြီးသားဆိုရင်တော့ ဆော်ရီပဲ။ မသိသေးသေးတဲ့ လူတွေကို အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ်။
အယင်းဆုံး Start>Run (or) Windows (key) + R ကို ဖွင့်လိုက်ပါ
ပွင့်လာတဲ့ box အထဲမှာ cmd လို့ရိုက် Enter (or) OK လုပ် command prompt ထဲကိုရောက်သွားလိမ်မယ်။
အဲဒီအထဲမှာ shutdown -s -t 3600 လို့ပေးလိုက်ပါ။ 3600 က စက္ကန့်ကိုပဲ ပြောတာနော်။ ကို ပိတ်ချင်သလောက်ကို ရိုက်ထည့်ပေါ့။
အဲဒီအချိန်ကျရင် အလိုလို ပိတ်သွားလိမ်မယ်။
written by Kyaw Ehna Jul 17
DriverPack Solution 11 (R230) Windows 7
Driver, ကွန်ပြူတာ4Comments »
Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7 | Part8 | Part9 | Part10 | Part11 | Part12 | Part13 | Part14 | Part15 | Part16 | Part17 | Part18 | Part19 | Part20 | Part21 | Part22 | Part23 | Part24 | Part25 | Part26 | Part27 | Part28 | Part29 | Part30 | written by Kyaw Cross Jul 17
၀င်းဒိုးစ် ဆဲဗင်း ဒေါင်းလုတ် (32 bit) x86
Windows, ကွန်ပြူတာ5Comments »
Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7 | Part8 | Part9 | Part10 | Part11 | Part12 | Part13 | Part14 | Part15 | Part16 | Part17 | Part18 | Part19 | Part20 | Part21 | Part22 | Part23 | written by Kyaw Cross Jun 13
ကရင့်ရေးရာ5Comments »
ဖူးဒို ၏ ရင်ဖွင့် စကားသံ စာတပုဒ်ကို Karen United တွင် တင်ထားတာ တွေ့ပြီးနောက် ဖတ်ရှုပြီးနောက် ကျနော်၏ မိတ်ဆွေများအားလည်း ဖတ်ရှုစေချင်သည့် အတွက် ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျနော် ငယ်စဉ်က ရည်ရွယ်ချက်တခုရှိပါသည်။ အရွယ်ရောက်သည့်တနေ့ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးတွက် ပေးဆပ်ရန် တော်လှန်ရေးတပ်သို့ ၀င်ရောက်မည်ဟု မိဘတွေကို ကြိုပြောထားပါသည်။ မိဘကတော့မတား၊ သို့သော်ကြုံ တွေ့ရမည့် အခြေအနေများကို နားလည်အောင် ကြိုပြောထားသည်။ အဖေပြောသည့်အတိုင်း အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀တွင် ဟင်းရှိသော်လည်း ထမင်းကိုဆားနှင့် စားကျင့်ခဲ့သဖြင့် ခံနိုင်ခဲ့ပါသည်။ လူပျိုပေါက် ကျောင်းသားဘ၀တွင် မိမိရည်ရွယ်ချက်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ငယ်စဉ်ဘ၀မှ မြင်တွေ့လာနေရသော အာဏာရှင် စစ်တပ်၏ နှိပ်စက်မှုများကို ခုထိမေ့မရ။ မေ့မရအောင် အာဏာရှင်စစ်တပ်က ယနေ့ထက်တိုင် တိုင်းရင်းသားများကို နှိပ်စက်တုန်း။ Continue reading »
written by Kyaw Cross Jun 13
Driver Pack (windows XP)
Driver, ကွန်ပြူတာ, ဒရိုင်ဗာ 8 Comments »
၀င်းဒိုးစ် xp အသစ်တင်ပြီးနောက်မှာ ဒရိုင်ဗာတွေ ရှာရတာ တခါတလေမှာ တော်တော်စိတ်ညစ်ရတာ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ခဏခဏပါဘဲ။ အခု ဒီ Driver Pack နဲ့ကျတော့ အတော့်ကို အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ကျနော် ၀င်းဒိုးစ်တင်ပေးဖူးသမျှ လက်တော့ရော၊ ဒက်စတော့တွေမှာပါ ခဏလေးနဲ့ ဒရိုင်ဗာတွေ ပြန်ရှာပေးနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ Continue reading »
written by Kyaw Cross May 17
၀င်းဒိုးစ်, ကွန်ပြူတာ6Comments »
၀င်းဒိုးစ် ဆဲဗင်း ထည့်သွင်းခြင်း (Windows7OS installation)
Windows XP ထည့်သွင်းပုံကို ဒီစာမျက်နှာမှာ ကြည့်ပါ။
2. ကွန်ပြူတာကို ရီစတတ် (Restart) လုပ်လိုက်ပါ။
3. POST (power on self test) ပေါ်လာချိန်မှာ ကီးဘုတ်ပေါ်က Delete ကီးကို ခေါက်ပေးပါ။ BIOS setup (basic input / output system ပေါ်လာစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ (BIOS အမျိုးအစားအလိုက် ပုံစံတွေကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ အတူတူပါဘဲ။) (BIOS setup ပေါ်လာဖို့အတွက် Delete key မဟုတ်ဘဲ F2, F12, Esc စသဖြင့်တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။) Continue reading »
written by Kyaw Cross Previous Entries i3Theme 1.7 is designed by N.Design Studio, customized by MangoOrange™, sponsored by Top 10 Web Hosting Worldwide and Hosting in Colombia.
နိုက်တင်ဂေးလ်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်	ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၂
ယခင်ဂျာနယ်များ ဖတ်လိုလျှင် ...
ကရင်စာမျက်နှာ	Karen National Union
ကွန်ပြူတာစာမျက်နှာ	မြန်မာ (Burmese)